200 000 oo Iswiidhish ah ayaa aqoonsigooda laga xadaa sanadkii - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
200 000 oo Iswiidhish ah ayaa aqoonsigooda laga xadaa sanadkii
La daabacay måndag 7 augusti 2017 kl 10.15
Iswiidhish 200 000 gaaraya oo sanad walba aqoonsiyadooda laga xado
sawir: Marcus Ericsson/TT
Dalkaan Sweden ayaa waxaa aad kor ugu kacey dadka aqoonsiyadooda si qaldan loo isticmaalo iyagoon ka warqabin.
Qiyaastii 200 000 oo Iswiidhish ah ayaa arrinkaan dhibaato ka soo gaartey sida lagu sheegey warbixin ka soo baxdey hey’adda Sifo, tirada dadkaas aqoonsiyadooda si afduub ah loo isticmaalo ayaa kor u kacdey marka la barbardhigo tiradii sanadkii hore la soo bandhigey.
Waxyaalaha ugu badan ee loo isticmaalo waraaqahaas aqoonsi ee dadkii lahaa laga afduubey ayaa waxaa ka mid ah iyadoo lacagaha dadkaas koontooyinka ugu jira laga xado ama lagala baxo iyo sidoo kale in magacooda alaabooyin kala duwan lagu iibsado.
Ingegerd Widell oo ka hawlgasha xafiiska diiwaangalinta dadweynaha dalkaan Sweden ayaa iyadoo arrinkaan ka hadleysa waxay tiri sidan soo socota:
- Dad arrinkaani qabsadey oo aan la kulmey ama aan dhageystey waxay ku sugnaayeen xaalad aad looga naxo oo aan wanaagsaneyn. Waxa ayna dhib xoog leh kala kulmeen sidii sharkada kala duwan uga dhaadhicin lahaayeen in qofka aqoonsiyadaas isticmaaley uusan iyaga aheyn ee uu qof kale yahay, ayey tiri Ingegerd Widell oo ka hawlgasha xafiiska diiwaangalinta dadweynaha dalkaan Sweden.
Hey’adda Sifo ayaa baaritaan cusub oo ay sameysey kaas oo ay fulintiisa ka dalbatey shirkad lagu magacaabo Mysafety, ayey wareysatey 4 300 oo qof kuwaas oo 2,8 boqolkiiba ay sheegeen in sanadkii hore aqoonsiyadooda gaarka ah laga afduubey tiradaas oo boqolkiiba 2,3 boqolkiiba ka badan dadkii isla sanadkii hore aqoonsiyadooda gaarka ah laga afduubey.
Tiradaan ayaa laga yaabaa in qofka maqla ama akhriyaa uu u arko mid dad yar khuseysa balse guud ahaan dadka dalkaan Sweden waxay tiradaasi ka noqoneysaa in ka badan 200 000 oo qof.
Ingegerd Widell oo ka hawlgasha xafiiska diiwaangalinta dadweynaha dalkaan Sweden ayaa dadweynaha kula talisey in aysan cinwaankooda ku badalin waraaq qoraal ah oo ay buuxsheen balse ay taas badalkeeda isticmaalaan nidaamka digital-ka ee aqoonsiga bangiyada ( digital bank-id) , markii aad sidaas sameysid qofna lagama yaabo in uu adreeskaaga guri afduub ku sameeyo marka ay timaado dhanka boostada ama xafiiska diiwaangalinta dadweynaha dalkaan Sweden labadaba.
Sidaa u iska difaaci kartid
Ururka ka gaashaamashada xatooyada (Stöldsskyddsföreningen) ayaa isagu dadweynaha u diyaariyey waxyaalaha qofka la gudboon in uu sameeyo markii arrinkaan oo kale soo foodsaaro.
Lina Nilsson oo iyadu talabixinta u qaabilsan ururka ka gaashaamashada xatooyada ayaa iyadoo arrinkaan ka hadleysa waxay tiri sidan soo socota:
- Bogga aan aaladda internet-ka ku leenahay waxaa ku qoran talooyinkii uu raaci karo qofka dhibtaan oo kale ay soo wajahdo, sidoo kalana waxaa ku qoran sidii qofku marka horaba uga gaashaaman lahaa dhibtaan, ayey tiri Lina Nilsson oo iyadu talabixinta u qaabilsan ururka ka gaashaamashada xatooyada.
Haddii aadan wali gaashaan ka sameysan xatooyada noocaan oo kale ah, waxaa haboon in aad hadda ka sameysatid adoo raacaya talooyinkaan soo socda:
Sameyso qaabka ah in boostada kuugu timaado hab digital ah si aan gacanta loogu dhigin waraaqaha ay hey’adaha kala duwani kuu soo dirayaan.
Lix lambar oo sir ah waxaad u sameysataa moobiilkaaga iyo kombuter-kaaga shakhsiga ah.
Waligaa qashinka ha ku ridin waraaq ay ku qoran yihiin lambarka koonto ee aad bangiga ku leedahay.
Lambarka koontadaada bangi ha u qorin shirkad aadan kalsooni buuxda ku qabin.
Tan ugu sii muhiimsanina waa in aad si xoog leh u xafidatid koodka aqooni ee bangigaaga (Bank-id) iyo waliba taleefoonkaaga aan wali kuu laheyn lambara sir ah oo aad ku xiratey.